African Intelligence: UK oo u sheegtay Norway inay joojiso laba wajiilenimada ay ku wajahayso muranka Somalia iyo Kenya. - NorSom News
African Intelligence: UK oo u sheegtay Norway inay joojiso laba wajiilenimada ay ku wajahayso muranka Somalia iyo Kenya.
The Conversation ayaa sidoo kale sheegay in Kenya ay horey u cayrisay shirkadda shidaalka Norway ee Ex-Statoil(Equinor).
Wargeyska ayaa sidoo kale qoray in heshiiska is-fahamka ee ay galeen Somalia iyo Kenya, uuna saxiixay wasiirkii iskaashiga Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur, balse uu diiday baarlamanka Soomaaliya, uu ahaa mid uu soo diyaariyey danjirihii geeriyooday ee Norway Hans Wilhelm Longva.
Previous article(VG)-Towfiiq: Waan ka baxnay dalada ururada islaamka Norway ee IRN.
Next articleDaawo 1997: Sh Mustafe oo sharaxaya dhibta laga soo maray dhismaha masaajidka Towfiiq.